भारतीय च्यानल बन्द गरिए`कोमा सरिता गि`रीको आपत्ति, यसो भनिन् !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Thoughts/भारतीय च्यानल बन्द गरिए`कोमा सरिता गि`रीको आपत्ति, यसो भनिन् !!
भारतीय च्यानल बन्द गरिए`कोमा सरिता गि`रीको आपत्ति, यसो भनिन् !!
काठमाडौँ – निलम्वित नेतृ सरिता गिरीले समाचार मूलक भारतीय टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण ब`न्द गरिएको प्रति आ`पत्ति जनाएकी छन्। नेपाल सरकारलाई केहि भारतीय च्यानलमा प्रशारण भएका कार्यक्रम चित्त बुझेन भन्दैमा च्यानल लाई ब`न्द गर्न नमिल्ने गिरीको भनाई छ। रहेका समस्या लाई कुटनी`तिक तरिकाले समाधान गर्ने तर्फ सरकार लाग्नुपर्ने गिरी बताउँछिन्।
“नेपालको सरकार एकदुई अथवा केहि निश्चित च्यानलसँग खुशी छैन भन्दैमा सम्पूर्ण भारतीय च्यानल माथि प्रतिवन्ध लगाउन मिल्छ?”,गिरीले ट्वी`ट गर्दै भनेकी छन्।
गिरीले भारतीय समा`चार च्यानलहरु बन्द गरिनु लाई ‘कम्बल प्रति`बन्ध’को संज्ञा दिएकी छन्। समाचारमूलक भारतीय टेलिभिजन च्यान`लको प्रसारण बन्द गरिएको वि`रुद्धमा आफू रहेको उनको स्पष्ट भनाई छ।
we are against blanket ban over Indian news channels.If the govt has some problem, it should attempt to solve it through diplomatic channels.. https://t.co/uu08rNO2t4
— sarita giri (@sarita_giri) July 10, 2020
“हामी भारतीय समाचार च्यान`लहरुमा कम्ब`ल प्रतिबन्धको बिरू`द्धमा छौं। यदि सरका`रलाई केही समस्या छ भने उसले कुट`नीतिक तवरले समा`धान गर्न प्रयास गर्नुपर्छ।”,ट्वीटरमा गरीले लेखेकी छन्। नेपालको राष्ट्रियता र स्वाभिमानविरुद्ध भ्रमपूर्ण समाचार तथा विश्लेषण सम्प्रेषण गर्ने केही समाचार मूलक भारतीय टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण नेपालमा बन्द गरिएको छ ।
विदेशी च्यानल वितरक म`ल्टी सिस्टम अपरेटर (एम एस ओ)हरूले भारतीय न्युज च्यानलहरूको प्रसारण बिहीबार देखि नेपालमा बन्द गरेका हुन् । भारतीय च्यानलमा नेपालविरुद्ध भ्रमपूर्ण समाचार तथा विश्ले`षण सम्प्रेषण हुन थालेपछि च्यानलका ग्राह`कहरूले फोन र म्यासेज गरी त्यस्ता च्यानल ब`न्द गर्न वितर`कलाई आग्रह गरेपछि एम`एस ओहरुले यस्तो कदम चालेको बताइएको छ ।